PIX sy CODEX marika hiray tsikombakomba ao amin'ny vondrona media X2X - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » PIX sy CODEX marika hiray hina eo ambany vondrona media X2X
PIX sy CODEX marika hiray hina eo ambany vondrona media X2X
Ny PIX sy CODEX dia nanambara fa tokony hampidirina eo amin'ny orinasa marika tokana iray ny orinasa roa miaraka amin'ny fananganana ny vondrona X2X Media Group. Io fanamafisana marika io dia hanamafy ny tolotra ho an'ny Vondrona ho an'ny indostrian'ny fialam-boly, hampiasa ny lazan'ireo orinasa roa ho an'ny fanavaozana ho an'ny asa fanavaozana sy ny tanjaky ny injeniera eo ambany elo iray, raha mitazona ny mombamomba azy ireo sy ny làlan-dry zareo tsy miankina amin'ny tsena.
"Hatramin'ny nahazoan'i PIX ny CODEX tamin'ny volana aprily dia niasa mafy izahay," hoy i Marc Dando, Lehiben'ny Mpanoratra, X2X. "Ny fampihaonana antsika, natambatra ho marika tokana dia taratry ny ambaratonga mampientam-po eo anelanelan'ny ekipa ary izany dia hamerina amin'ny feo avo kokoa ny fitaovana entintsika mitondra ireo mpamorona, mpamorona sarimihetsika ary studio manerana izao tontolo izao."
Vokatry ny fampahalalam-baovao X2X:
Ny orinasa teknolojia fialamboly izay hiara-miasa amin'ny mpanjifa ahafahan'ny famoronana mamorona manerana ny tsingerin'ny fiainana.
Manolotra vahaolana amin'ny serasera azo antoka sy fitantanana ny votoaty.
Manome lanja ireo tanjaky ny vokatra vokatra roa sy ekipa R&D.
Hiasa amin'ny famolavolana vahaolana vaovao mahomby izay mamahana ny elanelana misy eo amin'ny famokarana sy ny paositra.
"Miova haingana ny tontolon'ny famokarana, ary ny fivoaran'ny fitaovana ampiasaintsika dia miatrika ny filana izao tontolo izao", hoy ny fanamarihan'i Eric Dachs, Lehiben'ny Mpanatanteraka, X2X. "Amin'ny maha-X2X Media Group dia natokana hanome anay haingana ny indostria haingana, azo antoka ary manerantany ary ny tontolo iainana miara-miasa izay manatsara ny famoronana sy ny fahombiazana amin'ny vidiny. ”
Ny foiben'ny X2X dia hijanona ao San Francisco, raha manitatra ny asan'ny injeniera ao Wellington, Odessa, Budapest, London, ary Royal Leamington Spa, miaraka amin'ny biraon'ny varotra sy fanohanana fanampiny any New York ary Los Angeles.
Momba ny X2X
Ny vokatra azonay ho an'ny indostrian'ny haino aman-jery sy fialamboly dia misy ny vahaolana famokarana ary koa ny fampisehoana firaketana an-tsarimihetsika avo lenta sy fitaovana ho an'ny fanohanana ho an'ireo mpivarotra fakan-tsary mihetsika ho an'ny fahita, fahitalavitra ary famokarana ara-barotra. Manome serivisy manokana izahay ao amin'ny sehatry ny famokarana haingana. Izahay dia manome antoka ny fitohizan'ny famoronana sy ny fampihenana ny risika amin'ny tetikasa amin'ny alàlan'ny fiantohana fa ny hevitra dia zaraina tsara, tehirizina ary tehirizina tsara mandritra ny dingana famoronana manontolo.
NewTek TriCaster® Mini mitondra ao amin'ny famokarana haino aman-jery UHD nomerika sy mikoriana amin'ny sekoly, orinasa ary matihanina AV - Novambra 8, 2019
Kôdeksa fialam-boly teknolojia Marc Dando Pix Spears & Arrows TV Technology TVU Networks X2X	2019-11-08
Previous: Ny QYOU Media dia mamorona fizarana fiaraha-miasa amin'ny vondron-tarika etnik any Canada
Next: NewTek TriCaster® Mini mitondra ao amin'ny famokarana haino aman-jery UHD nomerika sy mikoriana amin'ny sekoly, orinasa ary matihanina AV